Tsvangirai back in SA for 'medical treatment' – report | News24 Nigeria
Tsvangirai back in SA for 'medical treatment' – report 27 June 2016, 13:22 Most Read
Tsvangirai expected back in Zim after 'successful surgery' in SA
Harare - Former Zimbabwean prime minister and opposition leader Morgan Tsvangirai is reportedly back in South Africa for an unnamed medical treatment, a report said on Monday. According to New Zimbabwe, an unwell Tsvangirai was accompanied by two of his aides on a South African flight on Sunday, just less than a month after undergoing a "successful surgery" in Johannesburg.Party insiders, however, claimed that Tsvangirai had gone to South Africa for a medical review after his operation last month. News 24 previously reported that Tsvangirai was discharged from a South African private medical facility in May. It was not immediately clear what the long-time opposition leader was admitted for.However, a Zimbabwean tabloid, iHarare, suggested that the Movement for Democratic Change (MDC) leader was suffering from "stomach cancer".Tsvangirai last week addressed his supporters through a mobile phone that was connected to a public address system. He spoke to them from his home.The supporters had, according to a separate New Zimbabwe report, thronged the streets of Mutare to march against poverty and misrule. "I will join you soon. I am recovering well, I am with you in the struggle," he was quoted as saying amid thunderous applause from the "massive crowd".In allaying fears of him not being well in May, Tsvangirai urged his supporters not to worry much about him, saying they should instead forge ahead in making Zimbabwe better as the country was in a very "perilous state".